Izindaba - Ukuhlaziywa kanye nesimo sesimo semakethe yokuthengisa ye-wiring auto wangaphandle kwezilwandle ngo-2021
Imakethe yezingxenye zezimoto inkulu, futhi ukulinganiswa kwayo kwemakethe yomhlaba kufinyelele kuma-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-378, ngezinga lokukhula lonyaka elilinganiselwa ku-4%.
Zonke izinhlobo zezingxenye ezizenzakalelayo, phakathi kwazo okuthandwa kakhulu yizingxenye ezizenzakalelayo ezingashintshwa. Ngoba izimoto ziyaguga lapho zisetshenziswa ngokwemvelo, kunesidingo esikhulu sale mikhiqizo emakethe:
Izigaba zesondlo ezifana nezihlungi, amabhuleki, amathayi, ukumiswa, njll.
Izigaba zikagesi ezifana nezibane zokukhanya, izinjini zokuqala, ama-alternator, amaphampu kaphethiloli nezijovo
—Bushings, engine mounts, strut mounts, control arms, ball joint, stabilizer links kanye nezinye izingxenye zokumiswa, izingxenye zenjoloba nezigaba zemishini
—— Ama-wiper blades nezibambo zesicabha neminye imikhiqizo esetshenziswa ngaphakathi nangaphandle kwemoto.
Imboni yezimoto imboni yomhlaba uqobo lwayo, futhi izinhlobo eziningi zezimoto zithengisa emazweni angaphezu kwesisodwa noma esifundeni. Yize i-brand nemodeli ngayinye ingaba negama elehlukile emazweni ahlukene nasezifundeni, ingaphakathi nenjini nazo zizohluka. Kepha ngokujwayelekile, izingxenye eziningi ziyahambisana kakhulu futhi zingashintshelwa ezimotweni emazweni nasezifundeni ezahlukahlukene.
Kodwa-ke, uma kukhulunywa nje, inethiwekhi yomthengisi enikezela izingxenye zezimoto imvamisa ihlukile ezweni ngalinye nesifunda ngasinye, okungaholela kukwehluka kwamanani amakhulu ekuthengisweni kwemingcele yezingxenye zezimoto. Kodwa-ke, izingxenye ezinamanani aphezulu noma okunzima ukuzithola nezakhi ezenziwe abathengi baphesheya kwezilwandle zinesidingo esinamandla sezingxenye zezimoto. Imakethe yezingxenye ezisebenza kahle eMiddle East "igcwele ubungqabavu", nezimakethe zaseMpumalanga Yurophu, eRussia, e-Austra.